Vita ny tetezan’i Pomay : Afa- pahasahiranana ny ao Miandrivazo sy Morondava -
AccueilRaharaham-pirenenaVita ny tetezan’i Pomay : Afa- pahasahiranana ny ao Miandrivazo sy Morondava
21/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Maro ireo tanàna no hahazo tombontsoa taorian’ny fahavitan’ny tetezan’i Pomay izay hita any amin’ny lalam-pirenena faha-35 mampitohy an’i Miandrivazo sy Morondava ary eo amin’ny teboka kilometrika 308. Mirefy 82 metatra ity tetezana ity ary azon’ny fiara lalovana indroa miantoana satria dia mirefy 9 metatra ny sakany, fotodrafitrasa izay natao haharitra ihany koa. Raha ny tetibidin’ny fanamboarana dia mahatratra hatrany amin’ny 9 miliara Ariary ka ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana na ny BAD no namatsy ny vola, izay tafiditra anatin’ ilay tetikasa hoe PAIR na tetikasa fanajariana ny fotodrafitrasan’ ny lalana. Ny tetezana rahateo izay manampy betsaka ny mponina izay miazo an’i Morondava, satria dia rehefa avy ny orana dia misy hatrany ny fahatapahana noho ny fiakaran’ny rano. Afa-pahasahiranana tokoa ny mponina manoloana ny fahavitan’izao foto-drafitrasa izao satria dia maro ny vokatra avy any Morondava no mandalo eo, toy ny haza an-dranomasina izany izay mahavokatra hatrany amin’ny 26 tapitrisa taonina isan-taona . Tsy ny vokatra irery ihany anefa no mila io fahavitan’ny tetezana io fa eo ihany koa ny lafiny fizahan-tany izay mahatratra hatrany amin’ny 20 isan-jato, raha olona hatrany amin’ny roa tapitrisa kosa no mifamezivezy eo.
Tany an-toerana rahateo ny filoham-pirenena Malagasy Hery Rajaonarimampianina nitokana ity foto-drafitrasa ity ary nambarany tamin’ izany hoe “hita manoloana antsika eto ny fotodrafitrasa vaovao, ary tonga eto ny tenako hanamboatra sy hanomana ny hoavin’ ny firenena, hanamboatra firenena maoderna miaraka amin’ny fanohananareo ahy. Tsy ho ela izao ny fanamarihana ny faha-57 taona nahazoantsika ny fahaleovantena, ary fotoana izao hijerena ny fahafahana rehetra ananan’ny firenena manamboatra fotodrafitrasa fototra ho an’ny fampandrosoana tena izy, satria dia tena izany izao no ilain’ny vahoaka izay miandry ny tena fiovana sy fanarenana” hoy ny filoha nanoloana ireo vahoaka avy amin’ny faritra maro toa an’i Malaimbandy sy Mahabo tonga nanatrika ny lanonana fanokanana.
Ankilany, manoloana izao fahavitan’ny fotodrafitrasa izao dia nanamafy hatrany ny fahavononany hanampy an’i Madagasikara ny solontena maharitry ny firenena mikambana Abdelkrim Bendjebbour indrindra raha ny resaka fampandrosoana no resahina. Ny faritra Menabe rahateo izay efa nahazo ny fanohanan’ny mpamatsy vola maro toy ny FIDA, nahafahana nanamboatra ny tohodrano tao Manja(AD2M), miaro ny fanohanan’ny BAD nahafahana manondraka tany hatrany amin’ny 60.000ha tao Menabe hatrany Bevoay, izay mamoaka vary indroa isan-taona ary mamokatra vary 7 taonina isaky ny ha. Noho izany, tsy nisalasala ny filoha Hery Rajaonarimampianina nilaza fa “ny sehatry ny fambolena no mampiaina ny vahoaka Malagasy”.
Ankoatra ireo fotodrafitrasa ireo dia nanambara ihany koa ny lehiben’ny faritr’ i Menabe Gilbert Romain fa « tsy ho ela dia hiverina hiasa ny orinasa SUCOMA izay orinasam-panjakan », tsy nisalasala rahateo ny filoha nilaza fa « ny fiverenan’ny orinasa hisokatra indray dia tombony ho an’ny rehetra, nefa tokony hitandrina ny rehetra manoloana ireo olona izay tsy manana fikasana ankoatra ny fanimbana sy ny olona tsy manao afa-tsy ny mieritreri-dratsy. Ny tanjontsika mantsy dia ny hampandroso miaraka ny faritra, ary ho vitantsika izany satria dia manana andraikitra amin’ny fampandrosoana isika. Mariky ny fampandrosoana rahateo ny fahavitan’ny tetezana Pomay. Tsy hamitaka anareo rahateo ny Filoham-pirenena amin’izany lalan’ny fampandrosoana izany . Fotoana hiovana izao taorian’ny 50 taona niainana anatin’ny fahantrana . Hiara-hifanome tanana isika , ary hiaraka hahomby.Vonona rahateo ireo mpamatsy vola sy ireo firenena mpiara-miombon’antoka hanome tanana sy hanampy antsika” hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Nandritra ity fanokanana ity dia niara-dia tamin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana Rivo Rakotovao, ny minisitry ny Asa Vaventy ary ny solontena maharitry ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana Benjebbour Abdelkrim . Nanotrona izany ihany koa ny lehiiben’ny faritr’ i Menabe Gilbert Romain.
Manomboka sahady ny fampihorohoroana sy ny fanaovana “ramatahora” na dia mbola ilay vokam-pifidianana feno hosoka sy halatra ary tsy ara-dalàna no navoakan’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), ny 27 desambra teo. Toa vao ...Tohiny